Bellingham Homestead Orchards Chenin Blanc Wine 2018 (TW100108) ~ ICT.com.mm
HomeThe Warehouse MyanmarBellingham Homestead Orchards Chenin Blanc Wine 2018 (TW100108)
Sanama Reserva Sauvignon Blanc Wine 2018 (TW100065)Back to The Warehouse MyanmarTommasi Grappa di Amarone Spirits (TW90001)
Bellingham Homestead Orchards Chenin Blanc Wine 2018 (TW100108)
Winery: Bellingham Homestead Orchards Chenin Blanc Alcohol Content: 13 – 14% Wine Style: White – Buttery and Complex Food Suggestion: Cheddar and Gruyere Region: South Africa Years: 2018 တောင်အာဖရိကနိုင်ငံထုတ် Bellingham Homestead Orchards... [Learn more]
Winery: Bellingham Homestead Orchards
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံထုတ် Bellingham Homestead Orchards အမှတ်တံဆိပ် Chenin Blanc (2018) ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်ဝိုင်စပျစ်စိုက်ပျိုးရာဒေသတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Paarl မှာရှိတဲ့ စပျစ်ခင်းတွေကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းအနေနဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်း ၁၃၀၀ တိုင်အောင် စိုက်ပျိုးလာခဲ့ကြတဲ့ Chenin Blanc အဖြူရောင်ဝိုင်စပျစ်သီးကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Alcohol ပါဝင်မှု 13 – 14% ရှိတဲ့ White – Buttery and Complex ဝိုင်ဖြူအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွစ်ချိစ်အပြင် အခြားသောချိစ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပါ လိုက်ဖက်တဲ့ ဝိုင်ဖြူဖြစ်ပြီး ရေနွေးငွေ့နဲ့ပေါင်းခံထားတဲ့ ပုစွန်ဟင်းလျာ၊ အခွံမာပင်လယ်စာမီးဖုတ်ဟင်းလျာများ၊ အာလူးနဲ့ Saffron ကိတ်မုန့်များဖြင့်လည်း တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်တဲ့ တောင်အာဖရိကဝိုင်ဖြူ ဖြစ်ပါတယ်။
Bellingham's Homestead Series The Old Orchards isadry, full-bodied Chenin Blanc produced from 25-year-old Paarl bush vines. Vibrant and delicious with ripe red apple, Canary melon and citrus zest flavours on the palate. Delicious now, but can easily hold for another three years. Pair with crab cakes.
Chenin Blanc food pairings: steamed shrimp, grilled shellfish, potato and saffron cakes.